Ubuntu beNtlanzi | Ngeentlanzi
Nangona abantu abaninzi bejonga iintlanzi njengezilwanyana ezikruqulayo, ngubani onokusihlekisa ngemibala yemizimba yabo kunye neemilo abazishiya emanzini, mandikuxelele ukuba bayaphazama. Njengeekati kunye nezinja Iintlanzi nazo zinobuntu ezinokuba nesibindi kwaye zibe ndlongondlongo ngokuxhomekeke kwimeko zamanzi.
Ngokwendlela eyahlukileyo uphando lwezenzululwazi Kwenziwe, kubonwe ukuba iintlanzi zinokuba nesibindi kwaye zibe ndlongondlongo ukuba sonyusa ubushushu bamanzi, kuye kwafumaniseka ukuba banokusokola, njengabantu kunye nezinye izilwanyana, kwinto efana noxinzelelo.
Umzekelo, emva kokwenza iintlobo ezahlukeneyo zokulinga ngeentlobo ezimbini zeentlobo ze I-Barrier Reef encinci Kwilizwekazi lase-Oceanic, kwafumaniseka okokuqala ukuba ezinye iintlanzi zezi ntlobo, zibonakaliswa ngokuba neentloni, zibonise iyantlukwano nganye njengoko ubushushu bamanzi bonyukile, oko kukuthi, baye baba nesibindi kwaye baba ndlongondlongo ukufudumeza amanzi.
Ngale ndlela, xa iqondo lobushushu likhuphuke ngeedigri ezimbalwa, iintlanzi ziqala ukufumana utshintsho oluncinci kwindlela abaziphethe ngayo, zibangele ukuba babe ndlongondlongo ngakumbi kwaye basebenze ngakumbi.
Nangona abantu abaninzi bethandabuza ubunjani bezilwanyana, iziphumo zezi zifundo ziyamangalisa, kwaye kuye kwaziwa ukuba isilwanyana ngasinye sinobuntu obuthile kwaye oku kunokuxhomekeka ikakhulu kwizinto ezixhomekeke kuzo. indawo yokuhlala yazo yendalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Ubuntu bentlanzi